Premier League Oo Shaaciyey Ciqaabta La Marin Doono Ciyaaryahannada Diida Inay Kusoo Laabtaan Garoomada - Gool24.Net
Premier League Oo Shaaciyey Ciqaabta La Marin Doono Ciyaaryahannada Diida Inay Kusoo Laabtaan Garoomada
Masuul sare oo ka tirsan Premier League ayaa shaaciyey in ciqaab adag la marsiin doono ciyaaryahannada ku andacoonaya inay caafimaadkooda u baqayaan, haddii ay diidaan inay kusoo laabtaan tababarka.
20-ka kooxood ee horyaalka heerka koowaad ee Ingiriiska ayaa kulan yeelanaya Isniinta maanta, waxaanay ka xaajoon doonaan qaabka ay ciyaartoydu u samaynayaan tababarka iyagoo wadar ahaan laacibiinta koox walba ay u fal-gelayaan, isla markaana loo hoggaansamayo sharciga kamaynta caabuqa.
Laakiin sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Premier League ayaa sheegay in ciyaaryahannada walaaca qaba ee aan doonaynin inay kusoo laabtaan tababarka ay la kulmi doonaan ciqaab adag oo ah in gebi ahaanba laga jari doono mushaharooyinka.
Masuulkan oo aan magaciisa la xusin, waxa uu Sky Sports u sheegay in aanay hubin heshiisyada ciyaaryahannadan, laakiin tallaabada ugu horreysa ee laga qaadi doonaa ay tahay in mushaharka laga jaro, waxaanu yidhi: “Uma malaynayo in mushahar la siino doono. Anagu ma hubno xaaladda qandaraasyadooda ee waqtigan.
“Haddii aad weydiiso dadka dariiqyada jooga in ay tababarahan lahaayeen oo ay kubadda cagta ciyaari lahaayeen iyadoo laba jeer toddobaadkii shaybaad lagu samayayo iyadoo la siinayo £60,000 toddobaadkii, waxay odhan lahaayeen haa.”
Shirka maanta oo ay ka qayb-geli doonaan mulkiileyaasha kooxaha horyaalka Premier League ayaa waxay cod u qaadi doonaan kusoo laabashada wajiga hore ee tababarka, waxaana la filayaa inay cod buuxa ku ansixin doonaan.